China Classic bariiska ciddiyaha muraayadaha indhaha ee ragga warshad iyo alaab-qeybiye | Yinfeng
Ookiyaalaha ragga ee caadiga ah ee la laaban karo 20144
Ookiyaalaha cidiya bariiska caadiga ah ragga la habeeyey
Cat Eye Rivet Retro muraayadaha dumarka 5069
Leopard Retro Bariis Cidiyaha Muraayadaha muraayadaha
Ragga caadiga ah ee Sportiga muraayadaha
Muuqaalka caadiga ah iyo kuwa kala duwan, si loo xalliyo dhammaan xulashooyinka isku dhafan, muraayadaha qeexitaanka sare, si ay u sameeyaan sida ugu fiican ee ilaalinta indhaha.
Shayga No. 1818
Qalabka Frame PC
Qalabka muraayada PC/AC
Midabada La habeeyay
Muraayadaha muraayadaha ragga ee caadiga ah waxay ku habboon yihiin xilliga firaaqada, labiska, safarka, wadista, fuulista buuraha, kalluumeysiga, barafka iyo muuqaallada kale. Isticmaalka lenses-qeexidda sare, aad u soo saara midabo cad oo run ah, oo si dhab ah u soo bandhigaya waxa aad aragto. Macbadyada moodada, texture line silky. Waa raaxo in la xidho mana keeni doonto cadaadis xad dhaaf ah dhegaha. Nooca muraayadda waa la habeyn karaa, iyo resin, lens polarized, lens-beddelaya midabka, iwm. ayaa loo dooran karaa iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha. Sharax fudud oo jawiga leh, qaabaynta xarriiq faseexa ah, habaynta jinsiga oo isdhaafsan, khibrad labajibbaaran ee moodada iyo moodada.
UV400 ka-hortagga ultraviolet waxay si wax ku ool ah u xannibi kartaa iftiinka waxyeellada leh ee jidhka bini'aadamka. Muraayadaha muraayadaha waa sahlan tahay in la nadiifiyo oo waara, waxaana lagu dahaadhay filim ka-hortagga wasakhda vacuum iyo filim hydrophobic, kuwaas oo ku xooggan biyaha. Ku habboon isticmaalka iyo xidhashada muddada-dheer. Waxay si wax ku ool ah u ilaalisaa indhaha waxayna indhaha ka dhigtaa mid raaxo leh. Naqshad fudud, fudud laakiin aan dhexdhexaad ahayn.
Xiritaannada muraayadaha qorraxdu waxay si deggan u wajihi karaan caqabadaha qorraxda, cabsi la'aan ama cabsi la'aan. Waa doorashada ugu fiican ee qof kasta oo ka baqaya dhibaatooyinka isbarbardhigga.
Marka laga hadlayo baakaddeena, baakadaha caadiga ah waa: laba muraayadood oo gala boorsada PE, 12pcs oo ku jira sanduuq cad, 300pcs galay kartoon. Haddii aad hayso shuruudo kale oo baakadaha, fadlan xor u noqo inaad nala soo xidhiidho, waxaanu noqon doonaa markii ugu horeysay ee aanu ku siin jawaabta, xalka iyo suurtogalnimada.
1.Maxay tahay qorshahaaga soo saarista alaab cusub?
Waxaan cusbooneysiin doonaa alaabtayada waqti ka waqti si aan macaamiisha u siino doorashooyin badan. Oo sii wad hagaajinta badeecad kasta.
2.Macaamiidee ayaa shirkaddaadu ka gudubtay kormeerka warshadda?
BSCI.Haddii macmiilku leeyahay shahaadooyin xisaabeed gaar ah, waxaanu sidoo kale taageeri doonaa oo la shaqayn doonaa.
3Waa maxay mabda'a naqshadeynta alaabtaada?
Waa ergonomic, ku habboon inaan xidhno, waana raaxo iyo fidsanaan.
4.Macaamiilku ma u baahan yahay in uu bixiyo shaybaarka?
Haddii ay tahay caddaynta alaabtayada jira, looma baahna in la bixiyo kharashyo kale. Laakin haddii aad u baahato in aad wax ka samayso alaabta, waxa aad u baahantahay in aad bixiso kharashka caaryada. Kharashka ayaa dib loo soo celin doonaa ka dib marka macaamiishu dalbado dalab weyn.
Hore: Ragga qadiimiga ah ee muraayadaha bariiska ee nuska ah
Xiga: Ookiyaalaha ragga ee caadiga ah ee la laaban karo 20144
Muraayadaha Weyn ee Square ee Ragga
Muraayadaha Ragga ee Dhamaadka Sare
Ragga Ookiyaalaha Hadhka
Muraayadaha Acetate Mens
Muraayadaha akhriska ee fudud ee laalaabi karo jir yar
Soo jiidashada muraayadaha ilaalinta lugaha ee dib loo celin karo YF1803
Midabo godan oo aan boodh lahayn oo baaskiil wada muraayadaha qorraxda
Muraayadaha akhriska ee midabaysan ee daabacan ee shakhsi ahaaneed
Midabka badhkii ee muraayadaha iftiinka buluuga ah ee cad
Silica jel polarized muraayadaha ilaalinta uv f...
Muraayadaha Weyn ee Weyn, Muraayadaha Qorraxda ee La Weyn, Muraayadaha Xisbiga ee Shakhsi ahaaneed, Muraayadaha Weyn ee Isha Keliya, Muraayadaha Iftiinka Weyneeya, Muraayadaha Xisbiga,